Ny sakana fiarovana amin'ny tselatra miaraka amin'ny fivoahana avo indrindra amin'ny 120KA dia mety amin'ny fiarovana ny tselatra ny famatsiana herinaratra lehibe amin'ny toerana manan-danja. Ity vokatra ity dia ampiasaina betsaka amin'ny rafi-pahefana toy ny tobin'ny serasera finday, birao / tobim-pifandraisana mikraoba, efitrano fitaovan'ny fifandraisan-davitra, orinasa indostrialy sy toeram-pitrandrahana, fiaramanidina sivily, fitantanam-bola, fiarovana, sns. , kabinetra fitsinjarana herinaratra, Fizarana herinaratra AC sy DC, vata fametahana, ary fitaovana manan-danja hafa izay mora voan'ny tselatra.
Rafitra TN-S: Ny tsipika N sy PE an'ity rafitra ity dia mifandray amin'ny terminal mivoaka eo amin'ny farany ambany amin'ny transformer ary mifandray amin'ny tariby an-tany. Alohan'ny hidirana ao amin'ny boaty fizarana ankapobeny amin'ny tranobe, ny N-line sy ny PE-line dia tariby tsy miankina, ary ny mpiaro ny fiakarana dia napetraka eo anelanelan'ny tsipika sy ny PE-line.
(1) Ny tselatra mivantana dia midika fa midona mivantana amin'ny firafitry ny tranobe, biby ary zavamaniry ny tselatra, ka miteraka fahasimbana amin'ny tranobe sy fatiantoka noho ny fiantraika elektrika, ny hafanana ary ny mekanika.
(2) Ny tselatra inductive dia midika fa rehefa mipoitra eny amin'ny tany eo anelanelan'i Lei Yun na Lei Yun ny tselatra, ny induction elektromagnetika dia avoaka amin'ny tsipika famantarana fampitaovana ivelany eo akaiky eo, ny tsipika fandevenana ary ny tsipika mampifandray eo amin'ny fitaovana, ary ny fitaovana elektronika mifandray amin'ny andiany amin'ny simba ny afovoan'ny tsipika na ny terminal. Na dia tsy mahery setra toy ny tselatra mivantana aza ny tselatra induction, dia ambony lavitra noho ny tselatra mivantana ny mety hitrangany.
(3) Ny firongatry ny tselatra dia endrika loza mitatao ho an'ny olona noho ny fampiasana tsy tapaka ny microelectronics tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary ny fomba fiarovana azy dia mihatsara hatrany. Ny loza matetika indrindra amin'ny fitaovana elektronika dia tsy vokatry ny tselatra mivantana, fa noho ny firongatry ny famatsiana herinaratra sy ny fifandraisan-davitra rehefa misy tselatra. Amin'ny lafiny iray, noho ny firafitry ny fitaovana elektronika tena tafiditra ao anatiny, dia mihena ny voltase sy ny fanoherana mahery vaika amin'ny fitaovana, ary mihena ny fahafahan'ny tselatra (anisan'izany ny tselatra sy ny firongatry ny overvoltage); amin'ny lafiny iray, noho ny fitomboan'ny lalan'ny loharano famantarana, ny rafitra dia mora iharan'ny fidiran'ny onjan-tselatra noho ny teo aloha. Ny voltase mirongatra dia mety miditra amin'ny fitaovana informatika amin'ny alàlan'ny tariby herinaratra na tsipika famantarana. Ny loharanom-pamokarana lehibe indrindra amin'ny rafitra famantarana dia vokatry ny fitokonan'ny tselatra, ny fitsabahana elektromagnetika, ny fitsabahana amin'ny radio ary ny fitsabahana elektrostatika. Ny zavatra metaly (toy ny tariby an-telefaona) dia misy fiantraikany amin'ireo famantarana fitsabahana ireo, izay hiteraka hadisoana amin'ny fandefasana angon-drakitra ary hisy fiantraikany amin'ny fahamarinan'ny fandefasana sy ny tahan'ny fifindrana. Ny fanafoanana ireo fanelingelenana ireo dia hanatsara ny toetry ny fampitana ny tambajotra. Ny orinasa GE any Etazonia dia nandrefy fa ny fihenan'ny tsipika fanaparitahana ambany (110V) amin'ny tokantrano amin'ny ankapobeny, trano fisakafoanana, trano, sns., izay mihoatra ny indray mandeha mihoatra ny indray mandeha dia mihoatra ny in-800 ao anatin'ny 10000h. (eo amin'ny herintaona sy roa volana), izay mihoatra ny in-300 mihoatra ny 1000V. Ny voltase fisondrotana toy izany dia azo atao tanteraka hanimba ny fitaovana elektronika amin'ny fotoana iray.
Nominal discharge ankehitriny Ao amin'ny 40KA
Imax 80KA ny fivoahana farany ambony indrindra
Ny haavon'ny fiarovana amin'ny voly Up ≤ 2.2KV
Fisehoana: miolakolaka, fotsy, marika tamin'ny laser
Nominal discharge ankehitriny Ao amin'ny 60KA
Imax 120KA ny fivoahana farany ambony indrindra
Ny haavon'ny fiarovana amin'ny voly Up ≤ 2.7KV
Fisehoana: fisaka, mena, fanontana pad
80 Famoahana farany ambony indrindra: 80, 100, 120
385 Volavolan'ny asa mitohy farany ambony: 385, 440V~ T2: amin'ny anaran'ny vokatra andrana Class II
4 Fomba: 1p, 2p, 1+NPE, 3p, 4p, 3+NPE
MODELY LH-80 LH-100 LH-120
Volavolan'ny asa mitohy farany ambony Uc 275/320/385/440V~ (tsy voatery azo namboarina)
Anarana fivoahana ankehitriny In (8/20) 40 60 60
Imax (8/20) farany indrindra 80 100 120
Nitombo ny fiarovana ≤1.8/2.0/2.3/2.4KV ≤2.0/2.2/2.4/2.5KV ≤2.3/2.5/2.6/2.7KV
Fisehoana azo atao Fiaramanidina, arc feno, arc (tsy voatery, azo zahana)
Afaka manampy famantarana lavitra sy fantsona fivoahana Afaka manampy famantarana lavitra sy fantsona fivoahana
tontolo iainana miasa -40 ℃ ~ + 85 ℃
COLOR Fotsy, mena, voasary (tsy voatery, azo amboarina)
teo aloha: Fitaovana fiarovana 18 Firafitra fiarovana
Manaraka: 27 Sidall Structure Surge Fiarovana Fiarovana
Fitaovana akora: PA66/PBT
Endri-javatra: pluggable Module
Remote fanaraha-maso asa: tsy misy
Loko Shell: default, azo zahana
Famerenana ny lelafo: UL94 V0
MODELY mitambatra Size
LH-120/385/2P 2 p 54x90x60(mm)
LH-120/385/4P 4 p 108x90x60(mm)
●Tsy maintsy tapaka ny herinaratra alohan'ny fametrahana azy, ary voarara tanteraka ny fandidiana mivantana
●Aroso ny mampifandray ny fuse na ny automatique circuit breaker amin'ny andiany eo anoloan'ny maody fiarovana ny tselatra
●Rehefa mametraka dia ampifandraiso araka ny kisary fametrahana. Anisan'izany, L1, L2, L3 dia phase tariby, N ny tsy miandany tariby, ary PE ny tany tariby. Aza mifandray amin'ny diso. Aorian'ny fametrahana dia manakatona ny switch automatique breaker (fuse).
●Aorian'ny fametrahana dia jereo raha mandeha tsara ny maody fiarovana ny tselatra
10350gs, karazana fantsona fivoahana, misy varavarankely: Mandritra ny fampiasana dia tokony hojerena sy hojerena tsy tapaka ny varavarankelin'ny fampisehoana. Rehefa mena ny varavarankelin'ny fanehoam-pahadisoana (na ny terminal famantarana lavitra an'ny vokatra miaraka amin'ny famantarana fanairana fanairana famantarana lavitra), dia midika izany fa ny maody fiarovana amin'ny tselatra Raha sendra tsy fahombiazana, dia tokony hamboarina na hosoloina ara-potoana.
● Famatsiana herinaratra parallèle Modules fiarovana tselatra dia tokony hapetraka amin'ny parallèle (azo ampiasaina ihany koa ny wiring Kevin), na azo ampiasaina ny wiring roa mba hifandraisana. Amin'ny ankapobeny, mila mampifandray ny iray amin'ireo lahatsoratra wiring roa ianao. Ny tariby mampifandray dia tokony ho mafy orina, azo itokisana, fohy, matevina ary mahitsy.
Fitaovana fiarovana amin'ny tselatra
Sampana fiarovana ny firongatry ny loza